PartnerStack - သင်၏ Affiliates၊ Resellers နှင့် Partners တို့ကိုစီမံပါ Martech Zone
PartnerStack - သင်၏ Affiliates၊ Resellers နှင့် Partners တို့ကိုစီမံပါ
ကြာသပတေးနေ့, စက်တင်ဘာလ 24, 2020 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇန်နဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၂ Douglas Karr
ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာသည်ဒီဂျစ်တယ် ဖြစ်၍ ထိုဆက်ဆံရေးများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများသည်ယခင်ကထက်အွန်လိုင်းတွင်ဖြစ်ပွားနေသည်။ ရိုးရာကုမ္ပဏီများသည်ပင်သူတို့၏အရောင်း၊ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများကိုအွန်လိုင်းတွင်ရွေ့လျားနေကြသည်။ ရောဂါကူးစက်မှုများနှင့်ပိတ်ဆို့မှုများသည်အမှန်တကယ်ပင်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည်။
နှုတ်နှင့်စပ်ဆိုင်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်း၏အရေးကြီးသောကဏ္ aspect တစ်ခုဖြစ်သည်။ အစဉ်အလာအရအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရထိုရည်ညွှန်းချက်များသည်မလုံလောက်နိုင်ပါ။ ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုဖြတ်ပြီးဖုန်းမြည်ရန်စောင့်နေသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာကြီးတွင်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုထိရောက်စွာအွန်လိုင်းပေါ်တွင်ကိုင်တွယ်ခြင်း၊ ခြေရာခံခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည်
Partner Relationship Management (PRM) ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုသည်မှာရောင်းချသူအားမိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ကူညီသည့်နည်းစနစ်များ၊ နည်းဗျူဟာများ၊ ပလက်ဖောင်းများနှင့်ဝက်ဘ်အခြေပြုစွမ်းရည်များဖြစ်သည်။ မိတ်ဖက်များအနေဖြင့်အခြားရောင်းချသူများ၊ အထက်နှင့်အောက်သို့ရည်ညွှန်းသူများ၊ တွဲဖက်စျေးကွက်များနှင့်ပြန်လည်ရောင်းချသူများပါဝင်နိုင်သည်။
မိတ်ဖက်အစီအစဉ်များသည်သင်၏အကောင်းဆုံးစံပြ ၀ ယ်သူများကိုရောင်းအားပေးသောအေဂျင်စီများ၊ ပြန်လည်ရောင်းချသူများနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအားသင်၏အရောင်းအဖွဲ့၏တိုးချဲ့ခြင်းအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးသည်။ ဒါကြောင့်အမြန်ဆုံးတိုးတက်နေတဲ့ SaaS ကုမ္ပဏီတွေဟာ ၀ ယ်ယူခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့ဝင်ငွေကိုမောင်းနှင်ဖို့မိတ်ဖက်တွေကိုသုံးပြီးဖြစ်နိုင်တာတစ်ခုတည်းထက်ပိုတယ်။
PartnerStack မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းနှင့်စျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ PartnerStack သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းထက်မကလုပ်ဆောင်သည် - ၎င်းသည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တိုင်းကိုအောင်မြင်ရန်အားပေးခြင်းဖြင့်ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းအသစ်များတည်ဆောက်သည်။
PartnerStack တစ်ခုတည်းသောဖြစ်သည် မိတ်ဖက်စီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်း နှစ် ဦး စလုံးကုမ္ပဏီများအတွက်ထပ်တလဲလဲဝင်ငွေအရှိန်မြှင့်ရန်ဒီဇိုင်း နှင့် သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏အောင်မြင်မှုသည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။ ထူးခြားချက်များနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများတွင် -
မျိုးစုံချန်နယ်များစကေး - သင်ပိုမိုသောအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုပိတ်ရန်၊ နောက်ထပ် ဦး ဆောင်မှုကိုထုတ်လုပ်ရန်သို့မဟုတ်သင်၏နောက်လာမည့်လှုပ်ရှားမှုကိုအသွားအလာယူရန်ကြိုးစားနေသည်ဖြစ်စေ၊ PartnerStack သည်မိတ်ဖက်အမျိုးအစားအားလုံးကိုကိုင်တွယ်ရန်တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းတို့အားလုံးသည်တစ်ပြိုင်နက်တည်းဖြစ်သည်။
PartnerStack API ဖြင့်ဖြန့်ဖြူးသောကွန်ရက်များမှတဆင့်တိုက်ရိုက်ရောင်းချပါ
မိတ်ဖက်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့် - ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို ဦး စားပေးသည့်အစီအစဉ်များသည်ဝင်ငွေပိုမိုရရှိသည်။ PartnerStack သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လိုင်းများတစ်ခုချင်းစီအတွက်စိတ်ကြိုက်အတွေ့အကြုံများကိုဖန်တီးရန်၊ မိတ်ဖက်သစ်များကိုထိပ်တန်းစွမ်းဆောင်သူများဖြစ်လာစေရန်ကူညီပေးသည်။
ထုံးစံပုံစံများနှင့်အီးမေးလ်စီးဆင်းမှုနှင့်အတူမိတ်ဖက် onboarding အလိုအလျောက်
သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ပေးငွေများကိုအလိုအလျောက်ပေးပါ - ကုမ္ပဏီများသည် ၄ ​​င်းတို့၏အစီအစဉ်ကို PartnerStack သို့ရွှေ့ပြောင်းရသည့်အကြောင်းပြချက်များထဲမှတစ်ခုမှာ ၄ င်းတို့အနေဖြင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုလစဉ်လစာပေးရန်သေချာစေရန်အချိန်ဖြုန်းခြင်းအတွက်ပင်ပန်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ PartnerStack သည်သင့်အတွက်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုငွေပေးသည်။
အကြွေးဝယ်ကဒ်သို့မဟုတ် ACH မှပေးသောလစဉ်ငွေတောင်းခံလွှာကိုလက်ခံရရှိပါ
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် Stripe သို့မဟုတ် PayPal မှတစ်ဆင့်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆုလာဘ်များကိုရုပ်သိမ်းကြသည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် PartnerStack ကို အသုံးပြု၍ ဖောက်သည်လွှဲပြောင်းမှုများ၊ ၎င်းသည်မိတ်ဖက်ပါ ၀ င်ခြင်း၊ တက်ကြွခြင်း၊ ငွေပေးချေခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ admin လိုအပ်ချက်များအားလုံးအတွက်တစ်နေရာတည်းသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိမိတ်ဖက်နည်းပညာရှုခင်းကိုလန်းဆန်းစေသောအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း.
Ty Lingley၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့များ၏ညွှန်ကြားရေးမှူး
PartnerStack သည်သူတို့၏ဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုသောရာနှင့်ချီသောကုမ္ပဏီများနှင့်အတူတက်ကြွသောစျေးကွက်တစ်ခုရှိပြီးမိတ်ဖက်များ (ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့) သည်ကြီးမားသောကိရိယာများကိုမြှင့်တင်ရန်အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်စေသည်။ ၎င်းတို့တွင်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်၊ အရောင်း၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ စာရင်းကိုင်၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား၊ လူမှုမီဒီယာနှင့်အခြားအရာများပါဝင်သည်။
ယနေ့ PartnerStack Demo ကိုဘွတ်ကင်လုပ်ပါ
ထုတ်ဖော်: ကျနော်တို့ကတစ် ဦး Affiliate ဖြစ်ကြသည် PartnerStack!
Tags: Affiliate စီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းAffiliate စျေးကွက်ရှာဖွေရေးAffiliate ပလက်ဖောင်းမိတ်ဖက်စီမံခန့်ခွဲမှုမိတ်ဖက်စီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းမိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုချစ်သူprmလွှဲပြောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုလွှဲပြောင်းမိတ်ဖက်စီမံခန့်ခွဲမှုလွှဲပြောင်းပလက်ဖောင်းပြန်လည်ရောင်းချသူစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းပြန်လည်ရောင်းချသူပလက်ဖောင်းအချစ်PRM ဆိုတာဘာလဲ